ओस्टियोपोरोसिस: अलिकति ठेस लाग्दा पनि किन हुन्छ फ्र्याक्चर ? कसरी बच्ने ? - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ जनस्वास्थ्य ∕ ओस्टियोपोरोसिस: अलिकति ठेस लाग्दा पनि किन हुन्छ फ्र्याक्चर ? कसरी बच्ने ?
ओस्टियोपोरोसिस: अलिकति ठेस लाग्दा पनि किन हुन्छ फ्र्याक्चर ? कसरी बच्ने ?
हेल्थ आवाज सोमबार, २०७९ असार ६ गते, १३:३३ मा प्रकाशित
ओस्टियोपोरोसिस एक गम्भीर हड्डीको समस्या हो जसले मानिसहरूलाई हिड्न वा उभिन पनि गाह्रो बनाउँछ। यो समस्या मुख्यतया कम हड्डीको घनत्वको कारणले हुन्छ। यस्तो अवस्थामा हाम्रो शरीरले हड्डीको तन्तुको उत्पादन घटाउँछ, जसका कारण हड्डीहरू स्वाभाविक रूपमा कमजोर हुन थाल्छ। यस अवस्थामा हड्डीहरू पातलो र भंगुर हुने भएकाले हड्डीमा अलिकति टक्कर भए पनि भाँच्ने खतरा बढ्छ।
केही दशकअघिसम्म हड्डीको समस्या जस्तै उमेर बढ्दै जाँदा हुने समस्याका रूपमा हेरिन्थ्यो तर, बिग्रँदै गएको जीवनशैली र खानपानमा पोषणको कमीका कारण अहिले युवायुवतीमा पनि यस्तो समस्या देखिन थालेको छ ।
क्लिभल्याण्ड क्लिनिकको रिपोर्टका अनुसार ओस्टियोपोरोसिसको समस्या बिस्तारै बढ्दै जाँदा धेरैलाई आफू अस्टियोपोरोसिसको सिकार भएको थाहा हुँदैन । त्यति मात्र होइन, समयसँगै हड्डीहरू यति कमजोर हुन्छन् कि अलिकति ठेस लाग्दा, खोक्दा वा हाच्छ्युँ गर्दा पनि भाँच्ने खतरा हुन्छ । सबै मानिसहरूले यसको जोखिम कारकहरू बुझेर निवारक उपायहरू गरिरहनुपर्छ। यसलाई थप विस्तारमा बुझौं।
ओस्टियोपोरोसिस किन हुन्छ?
ओस्टियोपोरोसिस धेरै कारणले हुन सक्छ। कतिपय अवस्थामा यसबाट बच्न पनि सम्भव हुँदैन । स्वास्थ्य विज्ञहरूका अनुसार हाम्रो शरीरले पुरानो हड्डीको तन्तुलाई निरन्तर सोस्छ र नयाँ तन्तु उत्पादन गर्छ जसले हड्डीको घनत्व, बल र संरचनात्मक स्थिरता कायम राख्छ।
उमेर र जीवनशैलीका धेरै कारणहरूले नयाँ हड्डीको तन्तुको उत्पादनलाई असर गर्छ। जसकारण पुरानो तन्तु अवशोषित हुन्छ तर, नयाँ तन्तु बन्दैन। जसकारण यस्तो समस्याको जोखिम बढ्छ।
ओस्टियोपोरोसिसको लागि जोखिम कारकहरू बुझ्नुहोस्
ओस्टियोपोरोसिसले महिला र पुरुष दुवैलाई असर गर्छ। रजोनिवृत्तिपछि महिलाहरूमा एस्ट्रोजन हार्मोनमा अचानक कमी आएपछि जोखिम बढ्छ। एस्ट्रोजेन हार्मोन हो जसले सामान्यतया महिलाहरूलाई ओस्टियोपोरोसिसबाट बचाउँछ। आफ्नो परिवारमा ओस्टियोपोरोसिसको इतिहास भएका व्यक्तिहरूलाई यो रोगको आनुवंशिक रूपमा बढेको जोखिम हुन्छ। तपाईंको उचाइ र उमेरले पनि यो समस्या थप्न सक्छ।
ओस्टियोपोरोसिसका लक्षणहरू पहिचान गर्न महत्त्वपूर्ण
अस्टियोपोरोसिसका लक्षण पहिचान गरी समयमै उपचार सुरु गर्न सके यसको जटिलता कम गर्न सकिने स्वास्थ्य विज्ञहरू बताउँछन् । यद्यपि, प्रारम्भिक चरणहरूमा, धेरै मानिसहरूमा कुनै लक्षण वा लक्षणहरू देखा पर्दैन, जसकारण यो निदान गर्न गाह्रो हुन सक्छ। धेरैजसो अवस्थामा, यो समस्या भाँचिएको नभएसम्म पत्ता लाग्दैन। यद्यपि, मानिसहरूले केही लक्षणहरूको बारेमा होसियार हुनुपर्छ।
बल गरेर केहि कुरा समात्न गाह्रो हुने।
नङ सजिलै भाँचिने।
हड्डीको दुखाइ हल्का चोटपटकमा पनि बढी हुन्छ।
ओस्टियोपोरोसिस कसरी रोक्ने?
हड्डी स्वस्थ राख्न उपायहरू अपनाएर ओस्टियोपोरोसिसको जोखिम कम गर्न सकिन्छ। यसका लागि आहारमा पोषक तत्वले भरिपूर्ण चीजहरू समावेश गर्नुहोस्। हड्डीलाई बलियो बनाउन क्याल्सियम र भिटामिन डीको सेवन आवश्यक हुन्छ। हड्डीको स्वास्थ्यलाई बढावा दिने अन्य पोषक तत्वहरूले प्रोटिन, म्याग्नेसियम, भिटामिन के र जिंक समावेश गर्दछ। खानपानसँगै शारीरिक गतिविधि र नियमित व्यायाम गर्ने बानी बसाल्नुहोस् ।